Kenya: Alshabaab oo ka khudbeeyey toolooyin ka tirsan Mandera – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dagaalyahanno ka tirsan Alshabaab ayaa markale la wareegay tuulooyinka tirsan gobolka Woqooyi Bari Kenya, waxeyna u khudbeeyeen dadka deegaankaas.
Tuulooyinka Alshabaab qabsadeen ee ay muddada kooban joogeen ayaa ka tirsan deegaanka Mandera ee ku taalla xadka Soomaaliya, halkaas Alshabaab ka geysteen weerarro dhiig badan ku daatay.
Dableydan ayaa waxa ay khudbado u jeediyeen dadka deegaanka, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in boqolaal qof ay ka qaxeen tuulooyinkii ay deganaayeen. Weerarka kaddib ayaa waxaa soo warar sheegaya in albaabada la isugu dhuftay qaar ka mid ah iskuulada deegaanka.
Senetor-ka laga soo doorto deegaanka Mandera, Bilow Adan Kerow, ayaa sheegay in weerrarada Al Shabaab ay dhibaato ku yihiin guud ahaan gobolka. Waxaa uu sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay si degdeg ah wax uga qabato amni darrida ka jirta gobolka.
Alshabaab ayaa maalmo ka hor sidan oo kale ka khudbeeyey tuulooyinka hoos yimaada magaalada Gaarisa ee xarrunata gobolka Woqooyi Bari Kenya, taasoo muujineysa in Alshabaab si xoog leh u joogaan gudaha Kenya.
Milateriga Somalia iyo Amisom oo la wareegay Toora Toorow